About Us - Gaofuheng Electric Teknolojia Co., Ltd
plastika fefy sy ny fefy vy
tsindrona plastika bobongolo & hariana bobongolo
Shenzhen Gaofuheng Electric Teknolojia Co., Ltd. dia iray-mijanona maneran-tany Electronic Manufacturing mpanome tolotra ao amin'ny OEM & ODM karazana mamorona teti-PCB manarona, anisan'ny filana, fiangonana, fandaharana, asa fitsapana, plastika bobongolo tsindrona, famonosana ary ny fitaovana nanomboka tamin'ny 2008.
Ny vokatra isan-karazany ahitana ny zava-nitranga an-trano appliance, mpanjifa elektronika, orinasa fanaraha-maso, ny afo fanairana rafitra, lakozia appliance, fitaovana ara-pitsaboana, fiara-peo rafitra, computing sy ny fifandraisan-davitra, sns
Manana 8 feno fivoriambe andalana, anisan'izany ny SMT milina avy amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo hafainganam-pandeha ho any ambony hafainganam-pandehan'ny Juki Brands, ka ento-malalaka wavesoldering milina sy ny reflow milina, mandeha ho azy solder Mametaka mpanonta, X-ray mpanara-maso sy BGA rework fiantsonan'ny, ICT testers, Aoi fitaovana, namboarina FCT e fitiliana ary koa ny laboratoara fitiliana ho an'ny isan-karazany ny fahamarinan-toerana sy azo itokisana fitiliana.
Mino isika eo amin'ny kalitao sy ny fanompoana, dia ny lehibe singa mba handresy ny tsena. Foana isika no nanolo-tena ho fanatsarana ny kalitao sy ny asa fanompoana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fotodrafitrasa ary koa ny traikefa sy ny hevitra mpanjifa. Ny varotra mamirapiratra ekipa ihany koa manam-pahaizana amin'ny fifandraisana sy ny fahaizana ny valinteny haingana ny nanontany.
Tianay ny hamorona ny fandresena-fandreseny fiaraha-miasa miaraka aminareo. Mba andefaso olona antsika ankehitriny.